I-anesthesia yezokwelapha ze-series suppliers - i-AASraw powder
Uchungechunge lwe-anesthesia yezokwelapha
/ iimveliso / Unyango lwe-anesthesia
Singabathengisi be-anesthesia yezokwelapha, I-anesthesia yezokwelapha ezithengiswayo, Njengoko sithembisile, yonke i-anesthesia yethu ye powderysia ihlambulukileyo ayikho ngaphantsi kwe-98%.
Anesthesia powder Inkcazelo ngokubanzi
Kwindlela yokusetyenziswa kweyeza (ingakumbi ugqirha kunye namazinyo), i-anesthesia powder okanye i-anesthesia yimeko yokulahleka kwexesha okanye ukuqonda. Ingabandakanya i-analgesia (ukukhulula okanye ukuthintela intlungu), ukukhubazeka (ukuphumula kwemisipha), i-amnesia (ukulahleka kwememori), okanye ukungazi. Isigulane phantsi kweempembelelo zezilwanyana zamathambo zibizwa ngokuba yi-anesthetized.
I-Anesthesia powder yenza ukuba inzululwazi yeenkqubo zonyango ezinokubangela intlungu enzima okanye ingenakuxolisa kumntu ongenagxininiswa. Iindidi ezibanzi ezintathu ze-aneshesia zikhoyo:
Ngokubanzi i-anesthesia powder igxotha umgangatho wesenzo somnyuba kwaye ibangela ukungabi nalwazi kunye nokungabikho kwengqondo.
Ukutshatyalaliswa kwexesha kukunciphisa inkqubo yentsholongwane ephakathi kwinqanaba elingaphantsi, ukuvimbela ukukhathazeka kunye nokudala iikhumbuzo zexesha elide ngaphandle kokubangelwa nto.
I-anesthhesia yesithili kunye ne-anesthesia yendawo, evimba ukutshintshwa kweempembelelo zesibindi phakathi kwenkalo ejoliswe kuyo kunye nenkqubo yesantya ephakathi, kubangela ukulahlekelwa kwintsholongwane kwiqumrhu elijoliswe kuyo. Isigulane phantsi kwe-anesthesia powder ehlala kwingingqi okanye kwingingqi ihlala isazi, ngaphandle kokuba i-anesthesia jikelele okanye i-sedation ilawulwa ngexesha elifanayo. Izigaba ezibini ezibanzi zikhona:
Ukuthintela kwipheripherhibithi kukuvimbela ukuqonda kweengcinga kwinqutyana elithile elikude lomzimba, njengokugada izinyo kumsebenzi wamazinyo okanye ukulawula ibhodlo le-nervous to preventit the whole body.
Ephakathi, okanye i-neuraxial, i-blockade ilawula i-anesthetic kwimimandla yenkqubo ye-nervous ngokwayo, ukucima ingeniso engenayo ngaphandle kwendawo yebhloko. Imizekelo ibandakanya i-anesthesia ye-epidural kunye ne-anesthesia yomgogodla.
Ekulungiseleleni inkqubo yonyango, umboneleli wezempilo unika i-anesthesia ukhetha kwaye uqikelele amanani athile okanye ngaphezulu kweziyobisi ukufezekisa iindidi kunye nesantya seempawu ze-anesthesia ezifanelekileyo uhlobo lwenkqubo kunye nesigulane esithile. Iindidi zamachiza ezisetyenziswe ziquka i-anesthetics jikelele, i-hypnotics, i-sedatives, iziyobisi ezivimbela i-neuromuscular, i-narcotic kunye ne-analgesics.
Kukho iingozi ezinkulu kunye ezincinci ze-anesthesia. Imizekelo yemingcipheko emikhulu ibandakanya ukufa, ukuhlaselwa kwentliziyo kunye nokugqithiswa kwemiphunga, kodwa ingozi emincinci ingabandakanya ukukhwabanisa emva kokusebenza kunye nokuhlanza nokufundwa kwezibhedlele. Ubungakanani benkxenkqalazo eyenzekayo buxhomekeke kumngcipheko onxulumene nemimandla enxulumene nempilo yesigulane, ubunzima bokuhlinzwa okwenziwa kunye nohlobo lwe-anesthetic elisetyenziswayo. Kule miba, impilo yomntu ngaphambi kokuhlinzwa (echanekileyo yenkqubo ye-ASA ngokomgangatho wesimo) isona sithintelo esikhulu kunokwenzeka ukuba kukho inkxalabo. Izigulane zivame ukuvuka ngaphakathi kwemizuzu ye-anesthetic zipheliswe kwaye ziphinde zenzeke iingqondo kwieyure. Ngaphandle kweyodwa imeko ebizwa ngokuba yimizuzu engapheliyo yokusebenza kwengqondo emva kwexesha elide, ebonakaliswa ukudideka okuqhubekayo kweeveki okanye iinyanga eziqhelekileyo kulabo baphethwe ngumzimba kunye nabadala.
Ziziphi iintlobo ze-anesthesia powder?
I-aneshesia yendawo idibanisa inxalenye encinane yomzimba ngeenkqubo ezincinci. Ngokomzekelo, unokufumana udonga lwamachiza ngokukhawuleza kwindawo yokugada ukuvimba intlungu. Ungahlala uphapheme ngexesha lwenkqubo.
I-anesthesia yesithili i-powder ibhalela intlungu kwinxalenye enkulu yomzimba wakho. Unokufumana unyango ukuze uncede ukhulule okanye ulale. Iintlobo ze-anesthesia powder zommandla ziquka:
Iibhendi zentsimbi. Le ngqangi ye-anesthetic ukuvimbela intlungu malunga nerve okanye iqela leentsholongwane. Iibhloko zihlala zisetyenziselwa iinkqubo ezandleni, iingalo, iinyawo, imilenze, okanye ubuso.
I-Epidural kunye ne-anesthesia powder. Le yinto yokutshitshiswa kwe-anesthetic kufuphi nomtya womgogodla kunye neentsholongwane ezixhuma kuyo. Ikhusela intlungu evela kummandla wonke womzimba, njengokuba isisu, isisu, okanye imilenze.
Ngokubanzi i-anesthesia powder ithinta ingqondo yakho kunye nomzimba wakho wonke. Unokufumana i-anesthetics kwi-vein (intravenously, okanye IV), kwaye unokuphefumla kwezinye i-anesthetics. Nge-anesthesia jikelele ye powder, awukwazi kwaye awuve uhlungu xa uhlinzwa.
Ungayinciphisa njani ingozi yemiphumo emibi?
Into ebaluleke kakhulu ongayenza ukukhusela i-aneshesia i-effects effects is ukuqinisekisa ukuba ugqirha we-anesthesiologist uchaphazelekayo ekunyamekeleni kwakho. Ugqirha we-anesthesiologist ugqirha ogqirha ngokugqithiseleyo kwi-anesthesia powder, ulawulo lweentlungu kunye neyeza lokunyamekela.
Ngaphambi kokuhlinzwa kwakho, dibana nodokotela we-anesthesiologist ukuze uxoxe ngembali yakho yonyango, imikhuba yempilo kunye nendlela yokuphila. Olu lwazi luya kunceda ugqirha we-anesthesiologist ukuba uyazi njani indlela ongasabela ngayo kwi-anesthesia powder kwaye uthathe amanyathelo okunciphisa umngcipheko wempembelelo. Le ntla ngethuba elifanelekileyo lokuba ucele imibuzo uze ufunde oko ungalindela.
Ukufumana ilungelo elifanelekileyo lezinto ezivela kumthengi ofanelekileyo lithetha ezininzi, ukuqinisekisa ukuba umgangatho ongcono, ukunikezelwa okuzinzile kunye nentengiso-emva kokuthengiswa.